Nhau - Chii chinonzi Mobile Concrete Plant?
Ichishandiswa pane angangoita ese mapurojekiti ekuvaka, kongiri ikozvino inogadzirwa kumiti yekongiri ine chaiyo yekuyera uye yepamusoro yekusanganisa tekinoroji. Aggregate, samende, mvura uye zvinowedzerwa zvinoyerwa chaizvo pachikero chekuyera zvinoenderana nekongiri yekubikisa yakatarwa senge yapfuura marabhoritari miedzo uye inosanganiswa zvakaenzana neakanyanya kushanda nekukasira kongiri musanganiswa kuburitsa yemhando yepamusoro kongiri.
Munguva yakapfuura, zvese zvirimwa zvekongiri zvaigadzira semiti yemakongiri emira, uye kunyange idiki diki dzaigona kuiswa mune imwe nhambo mushure mekutakura nemarori mana kusvika mashanu; michero yakamira yakadai yaigadzira kongiri munzvimbo imwechete kwemakore mazhinji. Kuwedzera kwezvose zviri zviviri nhamba yemapurojekiti ekuvaka uye huwandu hwekongiri inodiwa muzvirongwa izvi, pamwe nekudiwa kwekupedzisa zvirongwa izvi munguva pfupi, zvave kutungamira makambani ekuvaka kuburitsa kongiri yavanoda kumabasa avo. yenguva yacho, makambani ekuvaka aida mafoni ekongiri anofamba, ayo ari nyore kuchinjika, akareruka kutakura uye akareruka kuisa pane akamira ekongiri zvirimwa, nekuti vaida kuendesa zvirimwa zvavo kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe pavanopedza zvirongwa zvavo. Nharembozha kongiri zvirimwa zvakagadzirirwa kugutsa izvi zvido.
Iyo Mobile Kongiri Dura ine zviyero zvakafanana seyakagadzika simiti kongiri, uko aya mauniti akagadzika pane chassis ine maasi nemavhiri. Kana ichi chassis chabviswa netirakita yetraki, iyo mbozhanhare kongiri simiti inogona kutakurwa nyore.
Otomatiki Aggregate Batching Machine, Aggregate Batching System, Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso, Concrete chisanganiso Spare Zvikamu, Otomatiki Aggregate Batching System, Aggregate Batching Dosing Sisitimu,